“KULMIYE Waxa Uu Khabiir Ku Yahay Sida Loo Yareeyo Xummadda Iyo Doodaha Shirarka Waanan Ka Gudbaynaa”. .. Khudbad Taariikhi Ah Oo Muuse Biixi Jeediyay | FooreNews
Home wararka “KULMIYE Waxa Uu Khabiir Ku Yahay Sida Loo Yareeyo Xummadda Iyo Doodaha Shirarka Waanan Ka Gudbaynaa”. .. Khudbad Taariikhi Ah Oo Muuse Biixi Jeediyay
“KULMIYE Waxa Uu Khabiir Ku Yahay Sida Loo Yareeyo Xummadda Iyo Doodaha Shirarka Waanan Ka Gudbaynaa”. .. Khudbad Taariikhi Ah Oo Muuse Biixi Jeediyay
Hargeysa (Foore)- Guddoomiyaha xisbiga Muxaafidka ah ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay Khubad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay Shirkii Golaha dhexe ee xisbihiisu ku yeeshay magaalada Hargeysa. Khudbadda Guddoomiyaha KULMIYE waxa nuxurkeedu ahaa Talooyin miisaan leh oo uu u soo jeediyay Xubnaha iyo Masuuliyiinta xisbiga KULMIYE, Garnaqsi aad u xeel dheer oo uu Guddoomiye Biixi ka sameeyey sababtii dhalisay Halgankii dib u xoraynta qaranka iyo Caddaalad darraddii ay shacabka Somaliland kala Kulmeen Soomaaliya Xornimadii iyo Midawgii Lixdii wixii laga dhaxlay isaga oo u qodobeeyey hab layaab leh. Waxa kale oo Khudbadda Guddoomiyaha KULMIYE taabatay siyaasadda xisbiga ee Hogaaminta dalka iyo aragtiyaha Mustaqbal ee ka midho dhalinta Himilada qarankani leeyahay isaga oo beesha caalamka ku canaantay sida ay uga gaabisay aqoonsi dalkani helo.
Khudbaddan Guddoomiyaha KULMIYE madashii shalay ka jeediyay waxa ammaanay Madaxweynaha Somaliland oo isna hadalkisii ku soo qaatay. Khudbadda Guddoomiyaha KULMIYE waxa ay u dhacday oo uu Guddoomiyuhu ku bilaabay sidan:
“Xisbiga KULMIYE waa xisbiga kaliya ee og walaalayaal taariikhdii dheerayd ee uu dalkani soo maray iyo halka ay Umaddani hiigsanayso iyo rajadeeda Mustaqbal. Aasaasaha xisbiga KULMIYE oo ah Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Siilaanyo, Guddoomiyaha, Xukuumaddiisa inta badan, Taageerayaashiisa iyo dhammaan masuuliyiintiisu waa kuwii qarnigii tagay dhammaadkiisii nabadda ka islaaxiyay ee ka dhaliyay Geeska Afrika, gaar ahaan Somaliland, waa kuwii Colaaddii guunka ahayd ee Ummadaha la kala dhex dhigay gaar ahaan Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhex qaaday ee nabadda keenay. Waxa ay garanayaan il-duufkii siyaasadeed ee laga dhaxlay Midnimdii Soomaaliyeed ee Lixdankii.
Walaalayaal Tusaale ayaan idin siinayaa. 1960kii bishii July kawdeedii, labadii dal ee midoobay soddon sano kadib 1990kii Dawladdii Soomaaaliya sidii ay u dhisnayd, sidii la isu dulmiyay iyo sidii la isu dhacay. Dagaalkii ka dhacay iyo Dib u xorayntii dalkani waxa ay ka dhalatay ee ay ku timid aan tusaale yar idinka siiyo. Baarlamankii Muqdisho 1990kii waxa ay tiradiisu ahayd 177 Xubnood, Soomaaliland waxa ay ku lahayd 17 Xubnood oo u dhiganta boqolkiiba sagaal 9%. Xukuumaddii Muqdisho ka dhisnayd 1990kii waxa ay ka koobnayd 56 xubnood, Somaliland waxa ay ku lahayd 7 waa wax u dhigma boqolkiiba laba iyo toban 12%. Safiirada Soomaaliya Xukuumaddii Soomaaliya 1990kii Somaliland waxa ay ku lahayd saddex, waa 7%. Gudoomiyayaasha Goboladu waxa ay ahaayeen 18 Badhasaab, Somaliland waxa ay ku lahayd Laba, waa 10%. Guddoomiyayaasha Degmooyinku waxa ay ahaayeen 84 Guddoomiye, Somaliland waxa ay ku lahayd 3 Guddoomiye. Hadaba Xisbiga KULMIYE masuuliyiintiisu waxa ay goob joog u ahaayen Dulmigaasi waxaanay ahaayeen kuwii ka dhiidhiyay ee ka xoreeyay dalka Dulmigaasi”.
Guddoomiyaha KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in siyaasadda KULMIYE ay tahay in uu danaha Somaliland ilaaliyo oo heshiis iyo wax wada qabsi kula noolaado dalalka aynu jaarka nahay ee Jabuuti, Itoobiya iyo dalalka Carbeed ee baddu inaga dhaxayso.
Guddoomiye Biixi waxa uu sheegay in Somaliland aanay beesha caalamka ka helin wixii ay mudanayd iyada oo aan loo abaal celin. Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE waxa uu sheegay in mar kasta oo shirweynahoodu soo dhawaado ama golihiisa dhexe kulmayo qayb warbaahinta ka mid ahi buunbuuniso, oo yidhaahdaan KULMIYE waa is haystaa oo Burbur ayaa ka imanaya.
“Waxa muhiim ah in la is waydiiyo sidee loo yareeyaa Xummadda Shirarka iyo doodaha, Kulmiye waxa uu waayo arag ku yahay in uu mar walba xakameeyo xummadda shirarka iyo doodihiisa. Inta uu dibadda ku soo tashado oo aragtidiisa soo mideeyo uu shirka isugu yimaad halkaana muwaafqo kala tagaa. Hore waa loo soo arkay maantana waa uu ka baxayaa.
Walaalayaal waxa inagu soo aadan oo inagu soo socda oo aan u diyaar garoobaynaa shirweynihii Guud ee xisbiga KULMIYE. Waa arrin caadi ah in shirarku Xummad yeeshaan, KULMIYE-na waxa uu waayo arag u yahay in uu Xumaddiisa ka tallaabo. Xubin kasta oo KULMIYE ka tirsan xilbaa saaran. Xubin kasta waxa waajib ku ah in aynu ilaalino habsami u socodka shirka hawlihiisa waa in aynu danta guud iyo ta xisbiga eegnaa. Xisbigu waxa uu xubinta ka mid ah siiyay xuquuq cad oo ah in uu doodo, wax doorto isna la doorto isagana waxa xisbigu ku waajibiyay waajibaad lagu leeyahay oo xisbigu ku leeyahay oo ay ka mid tahay in uu xeerarka u hogaansamo iyo in uu xisbiga Ilaaliyo oo qaadhaankiisa Bixiyo.
Ugu dambayntii waxa aan aad u soo dhawaynayaa ururadii ay xisbiga Midoobeen ee nagu soo biiray. Waynu midawnay oo mid baynu noqonay. Ururadaasi haddii aan tiriyo waxa ay kala yihiin: RAYS, DALSAN, qayb ka mid ah Ururkii Umadda, qayb ka mid ah xisbigii hore ee talada dalka hayay ee UDUB, iyo maan ilaawine DAMAL. Dhammaan ururadaasi waxaan leeyahay walaalayaal sidaasaynu ku midawnay oo maanta aad xisbiga kaga mid tihiin”. Khudbaddaas kadibna waxa uu Muuse Biixi hadalka ku soo dhaweeyay madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo.
Previous PostMasaajidada Sucuudiga Oo Lagu Xidhay Qalab Saxaya Qofka Salaadda Khalda Markuu Tukanayo (WARBIXIN XIISO LEH) Next PostGuddoomiyaha Sonyo Iyo Wefti Uu Hogaaminayo Oo Safar Shaqo Ku Tagay Degmada Sallaxley